DAAWO MUUQAAL:-Ra’iisul Wasaare Khayre Oo Guddoomiyay Kulan Looga Hadlay Habsami U Socodka Cafinta Daymaha Dalka Lagu Leeyahay |
DAAWO MUUQAAL:-Ra’iisul Wasaare Khayre Oo Guddoomiyay Kulan Looga Hadlay Habsami U Socodka Cafinta Daymaha Dalka Lagu Leeyahay
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayr, iyo wafidiga uu hoggaaminayay ee maalmahaan ku sugnaa magaalda Washington ee dalka mareykanka ayaa kulan ballaaran la yeeshay mas’uuliyiin ka kala socday dalalka dunida iyo hay’adaha deeqaha bixiya, Bangiga adduunka iyo hay’adda lacagta aduunka.
Ra’iisul Wasaare Xasan Cali khayre ayaa guddoomiyay kulan oo looga hadlayay habsami u socodka cafinta deymaha Soomaaliya lagu leeyahay
Wasiirka maaliyadda Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Dr Cabdiraxmaan Ducaale Beyle, ayaa ka warbixiyay ajandayaashii ugu waawaynaa kulamadii dhacay oo dhan iyo natiijadii kasoo baxday.
Wasiirka wasaaradda Qorsheynta, horumarinta dhaqaalaha iyo maalgashiga Jamaal Maxamed Xasan oo qayb ka ah wafdiga Ra’iisul wasaaraha ayaa isna ka war bixiyay rajada ay dowladdu ka qabto cafinta daymaha lagu leeyahay maadaama ay Soomaaliya kasoo baxday shuruudihii lagu xiray.
Ra’iisul Wasaaraha iyo wafdigiisa ayaa waxa ay kulan looga hadlayo joogtaynta taageerada dawladda ay siino Nowray la yeeyeen wasiirka arrimaha horumarinta Norway.
Ra’iisul wasaaraha ayaa sidoo kale kulan guul ku soo idlaaday la qaatay ma’uuliyiinta hay’adda horumarinta u qaabilsan Ingiriiska ee DFID, oo mashaariic badan ka wadda qeybo kamid ah Soomaaliya.
Ra’iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo ka qeyb galaya kulamada Guga oo ay ku kulmaan hay’adaha maaliyadda dunida ayaa marti ku noqoday dood looga hadlayay muhiimmadda uu kaarka aqoonsigu u leeyahay horumarinta.